Touche Imephu zikaGoogle ezikhutshelayo- iGeofumadas
Agasti, 2009 Google umhlaba / imephu, ezintsha
Kwiminyaka embalwa edlulileyo uGoogle waqalisa ukwenza imephu yamashishini, kule projekthi yayihlawula i-10 yeedola kwishishini ngalinye elalichazwe. Ngoku kukho isiseko esinokuboniswa kuzo zombini iimephu zikaGoogle kunye noGoogle Earth.
Ngoku khawufane ucinge ukuba kukho isicelo sokuba, ngokuyinika indawo kunye nerediyasi, unokuwakhupha amashishini aphakathi kwelo cala. Kukhethwa ngokodidi.
Touche Google Maps Extractor yenza oko:
Ukuba ndibe nale nto yokudlala, yayiza kundisindisa ezininzi uhambo lokugqibela. Masizame umzekelo:
Le yiTomball, eHouston, ndizakuzama ikhowudi ye-zip i-TX 77375. Ukuba sijonga kuGoogle Earth, xa sisebenzisa indawo ezinomdla singabona iisimboli ezahlukeneyo zeshishini, nangona zingaboniswanga ekuphakameni okufanayo ngezizathu zesithuba, ayizizo zonke iindidi ezikhoyo.
Ngexa iGoogle Maps ibukeka, kodwa ukuhamba kwipaneli engasekhohlo akusebenzi.
Makhe sibone ngokusebenza
Isicelo siye sabonakala sikhulu kum, ndongeza nje indawo, udidi "lweendawo zokutyela", ii-2 zeemayile ngeenxa zonke kunye nemizuzwana inkqubo yabuyisa iziphumo ezingama-36 ngedatha engaphezulu kunokuba inokucelwa:
Igama lekampani, ifowuni, i-zip code, iwebhusayithi, ububanzi, ubude kunye ne-URL ukubona ukuthunyelwa kweGoogle Maps.
Ngeenjongo zokumaketha i-geomarker iluncedo kakhulu, kuba ivumela ukufumana ubudlelwane bobuchule, amashishini okhuphisana nawo. Ukongeza ungathumela uluhlu kuluhlu lwefayile ye-Excel kwifomathi ye-cvs njengokwenza okungakumbi ngobuqhetseba nobude beekholamu.
Ndiyicinga ukuba inqaku elilandelayo le sicelo liya kubandakanya umbukeli okanye isizukulwana se-kml.
Xabiso? Iidola ze-27 zamaRandi, nangona unako ukukhuphela i-version yezilingo ukuqinisekisa ukuba yilokho ufunayo.
Lapha ungalanda i-Touche ye-Google Map Extractor.
Ngesinye isikhathi i-antivirus yayibika i-robot ye-spy ngexesha lokukhuphela nokufakela inkqubo, kodwa kubonakala ngathi ikhukhi elandelwayo inguqu yolu vavanyo.
Iindidi eziqhelekileyo zeGoogle Earth ziphela ze-12, eziboniswa uluhlu olungakwesokudla, kodwa ngokupheleleyo ngezigaba ezincinci zizungeze i-520.
Ukuze unike umzekelo, i-Real State inezigaba ezilandelayo:
-Iearhente kunye neRealtors
Izakhiwo zeeNdlu kunye neeComplexes
Ishishini kwiShishini (3)
Iiofisi zikaRhulumente (i-10)
Ezempilo kunye noNyango (51)
I-Real Estate (7)
Iintengiso zeeRitolo (108)
Ukuhamba (11) Lapha no ku khuphela ifayile ye-Excel yazo zonke iindidi kunye namacandelo amacandelo anikezelwe URuben Yau.
Umhlaba ka-Google KML
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-3D Imephu Yehlabathi, i-atlas yemfundo
Post Next Umphathi we-KML, ezininzi kwi-12 EurosOkulandelayo »
0 uphendula "Touche Google Maps Extractor"
Ndiyayirhoxisa into ebithethiweyo, iyasebenza kodwa ndingathi uGoogle "unqumle" izicelo ezijikeleze iirekhodi ze300 ngeseshoni nganye. Uyilo olufanelekileyo, ngokufanayo,
Ekugqibeleni ndithatha ixesha ukuyivavanya, ndiyifumene inomdla kakhulu, kodwa idemo isebenza kuphela e-USA, Canada nase-Italy (!). Ngaba uyazi ukuba "ngokupheleleyo" kuya kusebenza eSpain? Andikwazanga ukuphuma ngaphandle kwamathandabuzo kwiwebhusayithi yakho, kwaye ndilinde impendulo evela kumbuzo nge-imeyile